Dashi Customer Question
Select2MinMinOO အနီနဲ့ အစိမ်းက ဘာကွာလဲ ၊?
Select3KhinPhone Mu MGS ပါတယ်လို့ ဘူးမှာရေးထားတယ်နော်
Select4Khain Khain AungီDASHI က FDA လက်မှတ် ရပြီးသားလား ၊ တစ်ခြားဘာလက်မှတ်တွေကောရထားသေးလဲ ?
Select5Lone Lone သုံးတာကြာပါပြီ။ဈေးမတက်ဖို့ဆုတောင်းပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟင်းခတ်မှုန့်ပါ။
Select6Cho Cho Shein ညီမလေးက ဂျပန်မှာနေတုန်းက ဒါဘဲသုံးတယ် သုံးကြည့်ဆိုလို့ သုံးနေတာကြာဘီ အထုပ်သေးတွေ့ရင်၉ယ်ပြီးတော့သူများလက်ဆောင်ပေးတယ် ခုလို တရားဝင်တင်သွင်းတာ ၀မ်းသာပါတယ် သိပ် မရှာရတော့ဘူးပေါ့
Select7Hninnilar Mn ဆေးခန်းမှာတွဲပြီးရောင်းပေးနေပါတယ်
Select 8 Ya Ti Smile အခုသုံးနေပါတယ် ဝယ်တုံးကတော့ သူများညွှန်းလို့မဟုတ်ဘူး ငါးပုံလေးနဲ့ဆိုတော့ တခြားပစ္စည်းတွေထက် အန္တရာယ်ကင်းလောက်တယ်ဆိုပီးဝယ်ကြည့်တာ သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်
Select 10 Nan Su Mon လူတယောက်စာဆိုဘယ်လောက်ဇွန်းနဲ့ထည့်ရ မလဲမသိဘူးကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါလား
Select 11 Aye Thida အန်တီ ဆီးချိုရှိပါတယ် သုံးကြည့်တော့အစဉ်ပြေပါတယ် ထူးထူးခြားခြား ဆီချို တက်မလာပါဘူး ကြော်ငြာခမရပါဘူး စေတနာပါ
Select 12 Pyu New သွေးတိုးသမားများအတွက်အလွန်ကောင်း ပါတယ် လက်လွန် ထည့်မိလို့စားတာဘာသွေး မှမတိုပါဘူး။ လက်တွေ့ပါ။ အရမ်ကောင်းတယ်။ အိမ်ရှင်မတွေ လက်ဆင့်ကမ်းသုံးဖို့တိုက်တွန်း ပါတယ်။
Select 13 Daw May Thu သုံးရအဆင်ပြေလွန်းလို့ ဝယ်စားရတယ်တောင်မအောင့်မေ့ပါဘူး ကျေးဇူးတင်တယ် ဒီလို ခေတ်ဆိုးခေတ်ကျပ်ကြီး ထဲ မသမာမှု့တွေနဲ့ ရောစပ်ရောင်းချ နေတဲ့ အထဲ ပစ္စည်းကောင်းတခုကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ့ အာမခံ ရောင်းချပေးတာမို့ပါ
Select 14 Thin Mhway Khine မသုံးကြသေးသူများကိုလဲ ကျမကတိုက်တွန်းပါရစေ ကျမလေးဘက်နာလိုအဆစ်တွေနာနေတာ DASHIပြောင်းသုံးပြီး အချိုမှုန့်ဖြတ်လိုက်တော့ သက်သာသွားပါတယ် DASHIတင်သွင်းရောင်းချသူများ ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Select 15ှSky Moe အခု အသက် ၈၀ နားကပ်တဲ့ အဖိုးတို့ အဖွားတို့ကို လတိုင်းပို့ပေးတယ် သူတို့အချိုမှုန့်ဖျက်ထားတာနှစ်နဲ့ချီကြာပြီ ခုမှ အရာသာကောင်းကောင်းပြန်စားရတယ်တဲ့ Thanks . Dashi
Select 16 Zune Cherry သားသားလေး ၆လသားအရွယ်ထမင်းစကျွေးတည်းက သားသားထမင်းထဲ ထည့်ချက်ပြီးကျွေးပါတယ် ငါးအနံ့လေးနဲ့ အရသာချိုချိုလေးမို့သားသားလည်းအရမ်းကြိုက်ပါတယ် ခုသားက ၁နှစ်၆လရှိပါပြီ။ ခုဆိုရင်အိမ်မှာ ဟင်းလျာတိုင်းကို Dashi ဘဲ့ထည့် ချက်ပါတယ်။ ၁လကို ပုံမှန် ၂၅၀g ၁ဘူးကုန်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရပြီး အရသာရှိ အာဟာရပြည့် ဟင်းကောင်းတွေရရှိစေတဲ့Dashi ဂျပန်ဟင်းခတ်မှုန့် Quality အမြဲထိန်းထား နိုင်ပြီး ဒီထက်မကအောင်မြင် တိုးတက်ပါစေ။
Select 17 Daw San Kyi Dashi ဂျပန် ဟင်းခတ်မှုန့်ငါးမှုန့်ကိုတာရှည်ခံအောင်ဘာနဲ့လုပ်ထားလဲသိချင်ပါတယ်
Select 18 Kyaw Kyaw OO MSG ပါနေတယ် ဘယ်လို ယူဆရမလဲ ? ရှင်းပြပေးပါဦး
Select 19 Kyi Mar Win Maung အစိမ်းအနီဘာကွာလဲ သတ်သတ်လွတ် က ဘယ်ဟာလဲ ?